Kismaayo News » Daafadaha Aduunka : Kabaha militariga Suuriya oo xaabo ahaan loo shidanayo
Daafadaha Aduunka : Kabaha militariga Suuriya oo xaabo ahaan loo shidanayo
Kn: Waxaan maqli jirney “Kabahaada la gub”, dalka Suuriya waxaa si rasmi ah oga rumoobey habaarkaasi, iyada oo dadka ku dhaqan goobaha mucaaradka ay heystaan ay dadka xaabo ahaan u shitaan kabaha buudka ah ee militariga baxsadka ah ee xukuumadda Bashaar Al-Asad.
Magaalada Elepo ee ay mucaaradka gacanta ku hayaan waxaa la sheegey in dadka ay waayeen korontadii ama aysan goyn karin batroolka, sidaasi darteedna waxa ay haatan shidanayaan kabaha buudka ee militariga dalkaasi oo la sheegey in warshad dhan oo samayn jirtey bakhaaro waaweyn ka buuxaan kabaha laga daabulayo oo xaafadaha laga iibinayo.
Waxaa ka taagan fadeexad gilgishey dalkaasi taasi oo ku saabsan hilibka fardaha oo la sheegey in dadka looga iibiyey sidii isagoo ah hilibka lo’da.
Shirkad cuntada soo saarta ayaa la sheegey in kaartoonada ay hilbaha ku jiraan in ay ku dul qortey in uu yahay hilib lo’aad, balse baaritaan kadib la ogaaday in uu yahay hilib gamaan, tani waxaa la sheegey in ay si weyn u dhaawacday kalsoonida dadka wax iibsada.
Dowladda ayaa iyana si weyn loogu eedeeyey dayac iyo ka hortag la’aan.
Warar soo baxaya waxa ay sheegayaan in walxo meerayaal ah oo cirka kasoo daatay ay sidii roobkii ugu da’een dalkaasi, waxaana la sheegey in ku dhawaad kun qof ay ku waxyeeloobeen.
Dad seeynisyahano ah waxa ay sheegayaan in walxo cirka ka yimid ay ku dul qarxeen meel dhulka aad ugu dhow, taasina ay keentey in dhismayaal ay burburaan, islamarkaasina quruurado dhismahaasi ka burburey ay waxyeelada keentay.